Al-shabaab iyo Ciidamada Dowladda oo ku dagaalamay Gedo – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Al-shabaab iyo Ciidamada Dowladda oo ku dagaalamay Gedo
Warar dheeraad ah ay ka soo baxaya Dagaal u dhaxeeyay Xoogag katirsan Al-shabaab iyo Ciidamada Dowladda Soomaaliya oo xalay ka dhacay Degmada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Dagaalyahano katirsan Al-shabaab ay weerar ku qadeen Saldhig Ciidamada Dowladda ay ku lee yihiin duleedka Degmada Garbahaarey, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka culus iyo midka fudud.
Dadka Deegaanka ayaa sheegay iney maqlayeen Dhawaqa rasaasta ee labada dhinac ay iswidaarsanayeen,balse aysan ogeyn khasaaraha labada dhinac dagaalka ka soo kala gaaray.
Sarkaal katirsan Ciidamada Dowladda Soomaaliya kuna sugan Gobolka Gedo, ayaa sheegay in iska difaceen weerarka ay xalay Al-shabaab ku soo qadeen saldhig Ciidamada Dowladda ay ku lahayeen duleedka Degmada Garbahaarey,isla markaana wax khasaaraha dhankooda aysan soo gaarin Ciidamada Dowladda.
Al-shabaab wali dhankooda kama aysan hadlin dagaalka ay xalay ku qadeen Saldhigga Ciidamada Dowladda iyo khasaaraha ka dhashay Dagaalka.
Previous articleTALAABO LAGA QAADAY WARIYIHII SOO DIYAARISAY BARNAAMIJKII KA BAXAY HORYAAL TV
Next articleXarumaha Shidaalka Sacuudiga oo la duqeeyay